Imidiya yokuncokola-Ngaba uyimpumelelo engenakulinganiswa? | Martech Zone
Imidiya yokuncokola-Ngaba uyimpumelelo engenakulinganiswa?
NgoLwesibini, Meyi 22, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Lo mzobo ujolise kwizifundo ezitsha ezivela EMarketer, Hubspot, yaye LwezoLuntu iMedia namhlanje ekubekeni i-ROI enokulinganiswa kwimizamo yeendaba zosasazo.
Ukusuka kwi-Pagemodo infographic, Impumelelo engenakulinganiswa: Kule minyaka imbalwa idlulileyo, amashishini amancinci namakhulu athe gqolo ukuguqula iinzame zawo zentengiso kwimithombo yeendaba zentlalo, eqinisekile ukuba ukuzibandakanya kwizikhundla zentlalo kuya kuzisa iMali yokuBuyisa kutyalo mali (ROI). Kuyinyani, i-ROI yemithombo yeendaba kwezentlalo-ngokungafaniyo nezinye iindlela zokuthengisa- ilinganiswa ngempembelelo eyenzileyo, endaweni yembuyekezo yemali. Kulo nyaka, abathengisi bathembisa ukuhambisa zombini. Sifumanisa ukuba ixesha le-ROI enokulinganiswa ngokwenyani kwimidiya yoluntu lilapha.
Ndiyakholelwa ukuba i-ROI kwimidiya yoluntu inokulinganiswa, kodwa kufezekiswa kumanqanaba aliqela. Kunokubakho ukuguqulwa kwangoko, ukuguqulwa ngokungangqalanga okuvela kubalandeli kunye nabalandeli beemveliso, ukongeza kuguquko olusuka kwimpembelelo yexesha elide kunye negunya elenziwe ngokuhamba kwexesha. Akululanga ukubamba yonke idola efunyenwe ngesicwangciso-qhinga semidiya yoluntu, kodwa ungalandelela ngokwaneleyo ukubonisa imbuyekezo elungileyo kutyalo-mali.
Ingqondo kunye nokuBambisana kweShishini
Meyi 23, 2012 kwi-10: 29 AM
Lonke ishishini lineenjongo ezahlukeneyo zosasazo lwentlalo ngenxa yoko akunakwenzeka ukumisela ubungakanani obulingana nesicwangciso somlinganiso we-ROI. Amanye amashishini axhalabile ngakumbi kuthethathethwano ngelixa abanye bexhalabile kukuguqulwa.